सकियो कांग्रेसको गाउँ र नगर अधिवेशन, नेताहरूको ध्यान अब क्षेत्रमा – Sajha Bisaunee
सकियो कांग्रेसको गाउँ र नगर अधिवेशन, नेताहरूको ध्यान अब क्षेत्रमा
सुर्खेत, १६ माघ ।
नेपाली कांग्रेस सुर्खेतको गाउँ तथा नगर अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । शुक्रवारदेखि सुरु भएको अधिवेशन कहीं सर्वसम्मत् र कहीं निर्वाचनमार्फत् नेतृत्व चयन गर्दै शनिवार सम्पन्न भएको हो ।
जिल्लाका ४० गाविस र तीन वटा नगरपालिका मध्ये अधिकांशमा सर्वसम्मत् रूपमा नै नेतृत्व छनौट गरिएको छ भने केहीमा निर्वाचन गरिएको छ । तीन वटा नगरपालिका मध्ये वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र भेरीगंगामा निर्वाचन भएको छ भने सुभाघाट गंगामाला नगरसमिति सर्वसम्मत् नेतृत्व चयन गर्न सफल भएको छ । अन्य दुई नगरपालिकामा सर्वसम्मत् नेतृत्व चयन गर्ने प्रयास गरिएपनि असफल भएपछि शनिवार निर्वाचन गरिएको हो ।
गाउँ र नगर अधिवेशन सम्पन्न भएपछि नेताहरूको ध्यान अब क्षेत्रीय अधिवेशनतर्फ केन्द्रित भएको छ । माघ २२ गते हुने क्षेत्रीय अधिवेशनबाट नेतृत्वमा आफ्नो पकड जमाउन गुटगत अभ्यास सुरु भइसकेको छ । गाउँ र नगर अधिवेशनमा आफ्नो पक्षमा आएको मतपरिणामको जोड घटाउसहित दुवै पक्षले क्षेत्रीय अधिवेशनमा ध्यान केन्द्रित गरेका हुन् । क्षेत्रीय अधिवेशनबाटै जिल्ला अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनौट हुने भएकाले पनि यसलाई विशेष महŒवका साथ लिने गरिन्छ । संस्थापन र नेता शेरबहादुर देउवा खेमाका जिल्ला तहका नेताहरू एकले अर्को पक्षलाई निस्तेज पार्ने रणनीतिका साथ अघि बढेका छन् । देउवा पक्ष जतिसक्दो आफ्ना प्रतिनिधि बढी निर्वाचित गराउने कसरतमा लागेको छ भने संस्थापन पक्ष प्रतिनिधि छनौटबाटै देउवा पक्षका सम्भावित उम्मेदवारहरूलाई पराजित गरी जिल्ला अधिवेशन एकलौटी बनाउने रणनीतिमा लागेको बताइन्छ ।
देउवा खेमाका सशक्त मानिने नेता पूर्णबहादुर खड्का समेत रहेको क्षेत्र नं. १ मा देउवा पक्षकै पकड बलियो छ भने क्षेत्र नं. २ मा संस्थापन पक्ष बलियो देखिन्छ । संस्थापन पक्षका नेता हृदयराम थानी सोही क्षेत्रका हुन् । क्षेत्र नं. १ र २ मा दुईवटा खेमाको पकड रहेकाले क्षेत्र नं. ३ लाई निर्णायक क्षेत्रको रूपमा हेरिएको छ । क्षेत्र नं. ३ का सांसद एवम् जिल्ला पार्टी सभापति तप्तबहादुर विष्टले जुन पक्षलाई सहयोग गर्छन् सोही पक्ष जिल्ला अधिवेशनमा हावी हुने आँकलन गरिएको छ । स्रोतका अनुसार विष्ट यतिबेला संस्थापन पक्ष निकट छन् । यद्यपि उनी यसअघि देउवा खेमाका नेता हुन् । तर पछिल्लो समय थानी र विष्ट एउटै खेमामा पुगेको कांग्रेस निकटहरू बताउँछन् ।
यसैबीच नेपाली कांग्रेस वीरेन्द्रनगर नगर समितिको शनिवार भएको निर्वाचन विधिसम्मत् नभएको भन्दै देउवा पक्षले बहिष्कार गरेको छ । नगर सभापतिका उम्मेदवार ललित भट्टराईले शनिवार दिउँसो पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्नो प्यानलका सम्पूर्ण उम्मेदवारले निर्वाचन बहिस्कार गरेको बताए । ‘निर्वाचन प्रक्रियामा दुवै पक्षका प्रतिनिधि राखिनुपर्नेमा अधिकांश वडाहरूमा त्यसो गरिएन’ उनले भने, ‘नगर निर्वाचन आचारसंहिता बनाउँदा हाम्रा प्रतिनिधि बोलाइएन ।’ उनले निर्वाचन समितिको मिलेमतोमा मतदान प्रक्रिया नै गलत तरिकाले सुरु गरेको आरोप लगाए । उनले तत्काल अधिवेशन स्थगित गरी विधि विधान अनुसार पुनः निर्वाचन गरिनुपर्ने बताए ।
प्रकाशित मितिः १७ माघ २०७२, आईतवार ११:३१